Kushambadzira Buzzwords kubva Mashable | Martech Zone
Ivo vanhu ve Mashable vaisa pamwechete iyi infographic pa Mazuva makumi matatu ekushambadzira Buzzwords. Semukomana asingagone kumira kushambadzira taura, Ndinogara ndichikoshesa patinotarisa zvakanaka kushambadza BS. Ini ndichave akatendeseka, zvakadaro, uye ndinobvuma kuti ini ndinofunga iyi infographic ingangove izere nazvo.
Mitemo senge kushambadzira kwekushambadzira, infographic uye gamification hazvisi kushambadzira buzzwords, iwo mazwi chaiwo ayo mushambadzi wese anoda kunyatsonzwisisa. Uye dambudziko rangu hombe ndere term Dzoka Investment kunyorwa senge buzzword. ROI harisi buzzword… ichokwadi mhedzisiro. Tinoenderera mberi nekuona vamiririri nemabhizinesi asiri kuongorora kudzoka kwavo mukudyara achikundikana. Uye kana yavo ROI ikatadza, inouraya bhizinesi ravo - kwete kwavo kushambadzira.
Mamwe emamwe mazwi ari buzzworthy, asi zvakadaro hazvina kushata. Ini ndinoda izwi rekuti snackable zvemukati ... isu tinowanzo tarisa kumaminigraphics - infographics ayo anotarisisa pane imwechete chidimbu che data pane iyo nyaya yese. Zvinotakurika zvirimo zvinonzwika zvirinani uye zvinonongedzera kuhunhu hwekuti vanodyiwa sei. Kukosha zvirevo uye maKPIs anogona zvakare kunge ari buzzwords asi akakosha sekuti vatengesi vari kutarisa meseji yavo uye kuyera mhedzisiro.
Tags: 360 mushandirapamwekushambadzira kwekushambadzirabig datakubatikakushambadzira kwemamirirocplcuratortsika yekuitayakawana midhiyaKubatanagamificationkukura hackerpfungwakunyudza chiitikoinfographickpikushambadzira kwazvinop-commerceRoyiyechipiri chidzitiroshowroomingsnackable zvemukatizvekutengeseranasolomokudyidzanakufunga mutungamirikutaura kwevanhu vavirikukosha kwesarudzokutapukirwa
Jun 2, 2013 na8:03 AM
Ida rondedzero yako, iwo mazwi haanyatso kujaira kwandiri, saka ndinofunga zvakakosha kuti unzwisise zvakanyanya.
Yakanakisa uye inonakidza runyorwa Doug. Vazhinji vedu tine mhosva yekushandisa zvishoma zvishoma zvezvirevo izvi. Izvo zvinondiyeuchidza nezvemutambo wekambani wekupedzisira 90s kudana Buzzword Bingo. Yakakwana kune refu kutengesa mafoni kana kambani-yakafara misangano. Vamwe vangarangarira. Zvakadaro zvinoita kuti ndinyemwerere pandinofunga nezvazvo. Ini ndinobvumirana newe nezve ROI kuve chinhu chinodiwa, asi ini ndinotenderwa kusarura 🙂